Palestina : Nomena loka, avy eo nampijaliana ny mpanao gazety Mohammed Omer · Global Voices teny Malagasy
Palestina : Nomena loka, avy eo nampijaliana ny mpanao gazety Mohammed Omer	Voadika ny 07 Jolay 2008 20:22 GMT
Zarao: I Mohammed Omer dia mpanao gazety mbola herotrerony avy o Rafah, any Gaza. Vao herinandro maromaro lasa izao dia nahazo ny loka “Martha Gellhorn Award” izy noho ny fanadihadiana nataony mikasika an'i Gaza, raha vao 24 taona monja. Tamin'ny fiverenany nefa dia notazomin'ny Shin Beit i Omer, ary tapak'andro taorian'io dia tao amin'ny fiara mpitondra marary izy no tazana. Nanaiky moa ny mana-pahefana ao Israely fa nampihato an'i Omer, saingy nambaran'izy ireo “fanondranana entana antsokosoko” no antony nihazomana azy ary ny ratra taminy dia vokatry ny “fianjerana” fotsiny. Nisy mpaka sary namoaka sarin'i Omer eo amin'ny fandriana ny amin'ny hopitaly, ny mpitoraka blaogy kosa naneho ny hatezeran'izy ireo.
Isan'ny naneho ny heviny voalohany i DesertPeace, naneho ny hatezerany noho ny havitsian'ny vaovao avoaka :
Herinandro lasa izay dia saika matin'ny daroka nataon'ireo mpitandro filaminana Isaeliana ny namana, rahalahy, Mohammed Omer.
Tamin'ity herinandro ity dia ankizy palestiana roa no novonoin'ny Israeliana. Valo hafa naratra.
Nahita vaovao mikasika ireo ve ianareo tao amin'ny Associated Press ?
Nanome rohy amin'ny horonam-peo mirakitra resadresaka nifanaovana tamin'i Omer koa moa izy.
Izao no navalin‘i David Baldinger ao amin'ny fametrahana hevitra :
Tena mahafinaritra ny herin-tsain'i Omer. Raha izaho dia tsy nahazaka ny natao azy. Tena nampalahelo ny fanararaotana natao taminy, fa vao maika mampalahelo koa fa andro vitsy taorian'ny firavoravoany tany ivelany no nanaovana izany. Ny tantara tahaka itony dia tsy tokony avela ho fatifaty foana. Tsy misy fanazavana na fialana tsiny azo atao amin'ny natao an'i Omer. Misy fikasana tsara avy amin'ny ratsy angamba. Miharihary izao fa mandainga ny governemanta israeliana ary tsy azo antenaina mihitsy amin'ny fifehezana ny hery ananany.
Farany dia nanao fanamarihana mikasika ilay horonam-peo i Munich – and a little bit of everything :
Nisy olona nihaino ilay horonam-peo nilaza efa ela izy izay tsy naheno zavatra nampihetsi-po tahaka io. I Mohammed Omer eo amin'ny fandriany any amin'ny hopitaly, miresaka amin'i Barrows-Friedman ao amin'ny Flashpoints ao amin'ny Pacifica Radio. Vao haingana izy no tany Palestina.
Fanitsahan'ny olona sasany ny maha-olona ny hafa. Ny ranomaso fotsiny no miraraka.
Misy fanangonan-tsonia ato, mba hisy zavatra atao manoloana izao raharaha izao.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraJillian C. York
Tantaran'ny Isiraely farany 4 herinandro izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaLehiben'ny voanjo taloha tao Morondrano Andrefana no notendren'i Isiraely ho ambasadaorony vaovao ao Brezila
05 Jolay 2015Afrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaA-WA Hoy i Israely — ‘Eny!’ — Ho An'ireo Mpirahavavy Yemenita Mihira
05 Jolay 2015Afrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaSteven Salaita: Nahazo Asa Ao Amin'ny Anjerimanontolo Amerikana Ao Beirut, Miresaka Ireo Politikan'ny Mainty Hoditra Sy Ny Firaisankina Amin'i Palestina
Vakio amin'ny teny Español, македонски, عربي, Português, Italiano, English
Ady & FifandiranaFahalalahàna mitenyFifandraisana iraisam-pirenenaFoko sy FiavianaHafanàm-po an-tseraseraMedia sy Fanoratan-gazetyMpitsoa-ponenanaTeknolojiaZon'olombelona